OEMC: Mpiasa 60 no nisitraka fiofanana momba ny ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny zokiolona – Madatopinfo
Tsapa sy hita maso fa mihen-danja tokoa ny fanajana ray aman-dreny sy fanomezan-kasina ireo zokiolona eny anivom-piaraha-monina ankehitriny.
Mamelo-maso ny amin’izany indrindra ny Ofisy misahana ny fanabeazam-bahoaka ho olom-banona na OEMC, eo anivon’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ka nanatanteraka fampiofanana ireo mpiasa ao aminy, mikasika indrindra ny ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny zokiolona. Nisy araka izany ny lanonana famaranana ity fotoam-piofanana ity izay notanterahana ny zoma 17 jiona. Ny ONG » Heavenly culture World Peace and restoration of Light » (HWPL) no nanolotra ny fiofanana, ary maherin’ny 60 eo ny mpiasan’ny OEMC no nisitraka izany. Ireto mpiofana ireto indray no hampiofana ireo tompon’andraikitra eny ifotony ka hipàka eny anivon-tsekoly izany, mba hamerenana indray ny fahaiza-miaina eo anatrehan’ireo nahitàna masoandro.